Usejoyine iqembu laphesheya obengumdlali wePirates | News24
Cape Town – Lowo obengumdlali wasesiswini ku-Orlando Pirates, u-Edwin Gyimah, usejoyine iqembu elingompetha baseSweden izikhathi eziyisikhombisa, iHelsingborgs, kulandela inhlolokhono ebe yimpumelelo nedonse isonto lonke kule kilabhu.
Lo mdlali oneminyaka engu-26 ubudala futhi odlalela iqembu lesizwe laseGhana usayine inkontileka yeminyaka emibili naleli qembu kanti uzobe ebheke ukulisiza ukuthi likwazi ukunyukela esigabeni esiphezulu.
“Sijabule ukumemezela ukuthi umdlali waseGhana, u-Edwin Gyimah, usesayine inkontileka yeminyaka emibili neHelsingborgs IF,” sifundeka kanjalo isitatimende esishicilelwe ku-website yaleli kilabhu.
OLUNYE UDABA: UKhune uqokwe njengokaputeni weBafana
“U-Edwin Gyimah ubelokhu ekwinhlolokhono neqembu i-HIF futhi wadlala emdlalweni neKristianstad FC ngaphambilini ngaphambi kokuba kuqale isizini.
“Manje lo mdlalo odlala esiswini, ophinde akwazi ukudlala emuva, usayine inkontileka yeminyaka emibili nekilabhu.”
Umqeqeshi waleli qembu, uPer-Ola Ljung, uzwakalise ukuthokoza ngokusayinwa kwalo mdlali, waphinde wancoma kakhulu izinga eliphezulu akulona kanye nokuthi uyakwazi ukusebenziseka ngezindlela eziningi.
“U-Edwin ungumdlali omuhle ngamandla kanye nangobuchule. Usesimweni esifanelekile kakhulu futhi uzodlala indima ekilabhini. Yize noma engadlala ezindaweni eziningi, [kodwa] uthathwa njengomdlali wamaphakathi nesisu.”